Baarlamaanka Soomaaliya oo meelmariyey Sharci Dood adag ka taagan tahay, Dhaliyeyna Khilaaf.. – Puntlandtimes
MUQDISHO(P_TIMES)- Baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya ayaa cod gacan taag ah ugu codeeyey Sharciga Batroolka ee Soomaaliya oo ay isku khilaafsan yihiin dawlad gobaleedyada iyo dawladda Faderaalka, waxaana Sharcigan dhinacyadu u arkayeen mid ay kala duwan yihiin.
150 Xildhibaan ayaa u codeysay in meelmar laga dhigo Sharcigan oo loo gudbinayo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaai Farmaajo si meelmar looga dhigo oo u noqdo mid sharci ah.
Ra`iisulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa xalay dadaal badangaliyey sidii loogu codeyn lahaa sharcigan, waxaana Xukuumadda u ahaa mid muhiim ah maadaama ay dhawaan heshiisyo xagga Shidaalka ah la gashay shirkado gaar loo leeyahay.
Sharciga Batroolka Soomaaliya, waxaa si rasmi ah u diiday dawlad gobaleedyada Soomaaliya badankooda, oo ku sifeeyey mid aan sharci aheyn, maadaama ay Xukuumaddu diiday in wada hadal laga yeesho oo ay dhinacyadu isku afgarad ka gaaraan.
Soomaaliya dhawaan ayaa la xaqiijiyey in laga helay keydad waa weyn oo Shidaal, gaar ahaana gobalada Jubbooyinka ayaa ugu badan meelaha laga sameeyey Sahminta Shidaalka oo laga helay, waxaana ku jira aagag ay ku muransan yihiin Soomaaliya iyo Kenya, kuwaas oo bisha September ee nagu soo aadan lagu kala bixi doono.
Shirkado waa weyn ayaa kuhardamaya helida Saxiixa dawladda Faderaalka ee Shidaalka Soomaaliya, waxaana dhawaan LONDON lagu qabtay shir lagu xaraashayay qeybaha muhiimka ah ee Ceelasha laga helay Soomaaliya, waxaana ka dhalatay dood adag.